श्रीमान श्रीमती बिच झगडा हुन्छ भने तपाईलाई हाइपोमेनिया रोग पनि हुन सक्छ ? – fukuokanepal.news | सूचना र मनोरंजन को संगालो बोकेको नेपाली समाचार साइट
हाइपोमेनिया यस्तो रोग हो, जसम मानिसको मन अस्थिर रहन्छ । यस्ता मानिस बढी बोलि रहनु पर्ने हुन्छन । आफ्ना कुरामा जिद्धी गर्ने र भनेको नमान्ने अपशब्द वोल्ने, सानो कुरामा पनि बढी रिसाउने, मन सधै्र चन्चल रहने हुन्छ । यो रोग लागेको हो भनेर ठम्याउन गाह्रो नै हुन्छ । हाइपोमेनिया रोग लाग्दा श्रीमान श्रीमतीमा चर्को विवाद भएको पाइन्छ यति सम्मकि छुट्टा छुट्टै बस्न पुग्ने, बारम्बार कुट पिट भएको पनि भेटिएको छ । सबैभन्दा खतरा के छ भने यो रोग लागेको थाहनै हुदैन विस्तारै परिवारको एक सदस्य बढी रिसाउने, घमण्डी कुरा गर्ने, भनेको नमान्ने, तोडफोड गर्ने हुदै जानाले पछि मात्र यो रोग लागेको थाहा हुन्छ । सामान्य कुराकानीमा यो रोग लागेको पत्ता लगाउन सकिदैन ।
घमण्डी बन्ने, बढी फúर्ती लगाई कुरा गर्ने ।
यो रोग पटक पटक दोहोरिने भएकोले यो रोग बारे राम्रो जानकारी हुनु अति आवश्यक छ ।
कसरी मानसिक रुपमा स्वास्थ्य ९ःभलतबििथ ज्भबतिजथ० बन्ने ?
वाटो हिड्दा बिरालोले बाटो काट्यो वा रित्तो गाग्री देखियो भने अशुभ हुन्छ भन्ने गलत विस्वास छ । त्यसैले यस्ता बस्तु देख्दा मन वेचैन बनाउन हुदेैन ,मन ढुक्क नै हुनु पर्छ ।किनभने यसमा कुनै सत्यता नै छैन । राशिफल,हेराउने,भुत,प्रेत बोक्सीको युगको अन्त्य भइसक्यो, त्यस्तै यस्ता कुरामा चिन्तालिई समय बरवाद नगर्ने । बरु सफा पानी ताजा खानिकुरा खाने, राती वाटोमा हिड्दा भूत लाग्छ भन्दै मन डराएर ढुङ्गो देखि तर्सेर पनि मानिस बिरामि हुन्छ । मनोराग लाग्न पुग्छ । त्यसैले पुराना गलत चलनपनि हटाउन गर्छ । कसैलाई बोक्सी भनेर कुट्ने गरिन्छ जुन सतप्रतिसत झुटाहो । त्यसैले हाम्रो गाउघरमा पनि आधुनिक चेतना जगाउन आवश्यक छ । मरेको मानिसको आत्मा मनमा आउछ भन्ने वा मरेको मनिसले दुख्ख दिएको आदि गलत बिस्वास छ जुन सरासर झुटो सावित भएको छ । यसलाई विस्वास गर्नु हुदैन । बरु यस्ता कुरामा मनलनग्दा अशान्ति हुन्छ र मनेरोग लाग्छ ।
धेरै मानिस हरु आफु कहाँ बाट आएको भन्नेकुरा पनि र्विसन्छन,विगतलाई विर्सन्छन,वर्तमानमा सन्तोश लिन चाहादैनन्, किनभने समय पार गदै जाँदा ठुलो उन्नति भएको पनि बिर्सन्छन र सधै असन्तोषि भई रहन्छन् । विगतमा आफु कुन अवस्थामा थिए, अहिले कुन अबस्थामा आइपुगियायो भनेर मूल्याँङकन गर्नु पर्ने हुन्छ । धेरै जसो मानिसहरु ठूलो प्रगति गर्दा पनि क्षणिक आन्नद लिन्छन, त्यसैले मनमा सन्तोस भएको हुदैन त्यसले हामीले सन्तोष लिन सिक्न पर्छ । मैले यो अबधिमा यति गरे भगवानले मलाई यसरी पुराएका छन भनि सन्टुष्ठ हुन पर्छ तर मिहिनेत गर्न छाड्नु हुदैन । पुराना असफलता लाई केलाउदै लक्षमा पुग्न पर्छ ।